Lapho umshado bobulili obufanayo uvunyelwe? Uhlu amazwe lapho imishado yabantu bobulili obufanayo avunyelwe
Umbuzo mayelana nokuthi avunyelwe ukushada gay, abantu abaningi banesithakazelo. Thina, e-Russia, umthetho uvumela ukubhaliswa kobuhlobo obunjalo kungamukelwa, futhi akunakwenzeka nanini zigunyazwe, kodwa kukhona ezimbalwa eziningi emhlabeni lamazwe, uma kungenzeka.
Imithetho lidlule kuze 2000
Ngakho, ukukhuluma lapho bobulili obufanayo uvunyelwe, kufanele sitshele mayelana amazwe ukuthi avunyelwe ukubhalisa ubuhlobo obunjalo emuva lé ekhulwini XX. Ngakho, kwaba le Denmark ukubekezela isithwathwa kakhulu. It temabhodlela uhlu amazwe ukuthi avunyelwe imishado yabantu bobulili obufanayo, ngoba kukhona umthetho owaphasiswa ngo-1986.
Kube sekulandela Norway. Kukhona umthetho uvumela umshado phakathi kwabantu bobulili obufanayo sivunyiwe ngo-1993. Okuningi ngokunembile, Izinyunyana civil. Ngokusemthethweni, okungukuthi, kanye lokubhalisa, kuphela ngo-2009. Kusukela ngo-1995, Sweden bavunyelwe ukubhalisa ngokubambisana, futhi egcwele yongqingili - kanye eNorway, kusukela ngo-2009. Okumangazayo ukuthi, kodwa uhulumeni Bulgarian uye kuchasiselwe imifelandawonye ezifana namalungelo kwezomnotho (mayelana ukunakekelwa kwezempilo, ifa, izisebenzi zomnyango wofuduko kanye namalungelo yokungcwaba). Kusukela 2009, laba bantu avunyelwe ngokusemthethweni ukushada. Akhishiwe kuphela ilungelo lokushintsha igama yini ukuthi bathathe izingane.
Kusukela ngo-1996, waqala ukuchaza umthetho futhi Iceland - lapho abantu zobungqingili kungaba ukushada nokuba nomkhaya, njengalo lonke, nabo bonke amalungelo. ENetherlands - into efanayo, kodwa kusuka 1998. By endleleni, ukuthi kuleli zwe waba ngowokuqala ukwethula umthetho aphakanyisiwe ethi "umshado gay."
Imithetho emva 2000,
Nge xxi leminyaka ezweni lapho imishado gay avunyelwe, sekugcwele ohlwini. Kubonakala sengathi kwaba ngaphezulu futhi kwande uyinto ezifana ukubekezelelana. Ngokwesibonelo, kusukela ngo-2001, Finland uvunyelwe ukubhalisa ubuhlobo obunjalo, futhi ozakwethu banikwa ithuba bathathe izingane, futhi uthathe amagama nomunye. Kusukela ngo-2001, futhi eJalimane wavuma ukuqaphela ngokubambisana impilo, kodwa imishado agcwele bona babengakholwa.
Portugal e 2001 ezivelele ezingamaGreki nazo zamukela le isikhundla. Belgium - kusukela 2003, kanye Croatia. Luxembourg bajoyine amazwe aseYurophu lapho imishado yabantu bobulili obufanayo akuvumelekile 2004. New Zealand usekhiphe le isikhundla ngesikhathi esifanayo. ESpain, umthetho evunyiwe 2005, kanye ezenziwa eCanada nase-Switzerland. Futhi ekugcineni, Ireland ne-Argentina wajoyina uhlu uthi ibayeke 2009 no-2010 ngokulandelana.
Ukukhuluma ngokuthi lapho kuvunyelwe imishado yabantu bobulili obufanayo, uyobe wenza kahle uma wazi amanye amaqiniso athakazelisayo ezihlobana nesihloko. Ngakho, lo mbhangqwana wokuqala zokuthola izincwadi ezingokomthetho nobuhlobo babo, babe izinsizwa ezimbili. It Eigil futhi Axel Aksgily. Ziyakwazi izakhamuzi Denmark. Bhalisiwe umshado ngo-1989, 1 Okthoba - nje lapho ibutho umnyuziki langena umthetho ku kwabantu bobulili obufanayo.
Ngo-July 2010, ngokwesilinganiso, kwakubikwa simo esingavamile. Johanna Sigurdardottir - owesifazane lowo ophethe okuthunyelwe kaMongameli Iceland, libambisane ukushada kwabantu bobulili obufanayo. Ngakho, waba owokuqala emazweni main emhlabeni, ukukhipha komuntu umshado onjalo.
Futhi ekugcineni, neqiniso lokuthi abantu abaningi zibhekwa ngokufanelekile njengezidalwa ezingaphezu, okungenani, ayilungile. Kusukela ngo-2007, isonto IsiSwidi Lutheran bayibusisa ubuhlobo obunjalo. Akukho okwenzeka okwakufana nakho. Ngakho, Sweden yaba izwe lokuqala emhlabeni lapho imishado yabantu bobulili obufanayo avunyelwe esontweni kuqhakanjiswe. Kodwa akugcini lapho. Kusukela 2009, ngisho labetibambile umshado.
Ngakho, ukukhuluma yezwe lapho imishado gay avunyelwe, akunakwenzeka ukuba sixoxe ngabo nemithetho yabo kabanzi ukuqonda imininingwane isimo ukuthi, abantu baseRussia, kubonakala akwamukeleki nhlobo. Netherlands - lena isimo sokuqala ibhaliswe ngokomthetho ngokugcwele ukushada kwabantu bobulili obufanayo. By the way, indima ebalulekile ukwamukelwa ubuhlobo obunjalo kwaba Cairo International Conference eNhlangano yeziZwe, okuyinto ukhathazekile sabantu. Khona omningi okuye kwashiwo sokulingana kanye kulingana emiholweni. Futhi nganginomuzwa wokuthi ka legitimizing ubudlelwano phakathi la mantombazane amabili noma guys.
Ngakho, e-Netherlands, abantu angongqingili ungangena umshado civil, odlulayo emcimbini abavamile eCity Hall. Omunye wabo kumelwe nakanjani babe isakhamuzi kuleli zwe. Nokho, iziMeya, banelungelo ukwenqaba ukubhalisa ubuhlobo obunjalo. Futhi lokunika ilungelo bathathe izingane. Kungenzeka, kodwa izingane kuphela abayizisulu bamazwe yeNetherlands. Futhi ngempela kuphela icala uma umbhangqwana bekipitile okungenani ezintathu. Ohlwini, kunezinye izimfuno - isimo esihle sezimali, izimo ezifanele nokunye ..
Lesi simo futhi likuvumela amadoda angene ubudlelwane olusemthethweni nomunye, kanye abesifazane. Ukukhuluma ngokuthi lapho imishado izitabane zivunyelwe Europe, kuyafaneleka ukunakwa kanye nezwe. Belgium - yesibili ngemva Dutch State, ukuba afihle lokho ayikho umthetho wokubhaliswa kobuhlobo obunjalo. Ongqingili isingaba namalungelo afanayo abobulili obuhlukile uphiwe.
I-agumenti main, okuyinto bazuza uhulumeni Belgian, kuye kwaholela izimfuno eziningi yezakhamuzi ukunamathela ebulilini, ukwamukelwa kwenkolelo-ze umthetho ukulingana. BaseBelgium lithanda ucelwa ukuba abanikeze amalungelo efanayo neminye. Isimo bavumelana ngo-2003. Futhi ngo-2006, evunyiwe kakade ukuhlinzekwa olwenza abantu abanjalo ukuba bathathe izingane.
Lona isimo sesine unqume ukuba livumele ngokomthetho imishado enjalo. Isenzakalo esibalulekile esenzeka ngo-2005, okungukuthi ku-20 Julayi. Lokhu bill, ngasendleleni, kwaba omunye impikiswano kakhulu emlandweni wePalamende. Kwaphela iminyaka eminingana, abameleli umthetho futhi isimo babephikisana ngokuthi kungaba angavumela, noma cha. Kwakunabantu abaningi labamelene, kodwa kube umqondo ngokwanele abanazo.
Umthetho sivunyiwe. Ngokuhambisana abafana namantombazane ushade nalowo omele ubulili zabo kuphi (sikhuluma Canada, vele). Nokho ngenxa yakho konke ngazimbili kungenzeka ukuba afihle lokho ayikho ingane kusukela lezintandane.
Kufanele futhi uhlu uthi lapho imishado yabantu bobulili obufanayo kuvumelekile. E-US, abantu abamele ezincane ngokocansi, balwa ilungelo ukubhalisa ubudlelwano babo ngokusemthethweni isikhathi eside - kusukela 1970. Kodwa iziphathimandla yasiphendula abakuboni ngezinga ababengenza ngalo. Nokho, ekuqaleni kwekhulu xxi, lapho-Europe yaqala ukusakaza izitatimende mayelana imishado yabantu nge gay baseMelika waqala ukungakuthandi futhi. Ekugcineni baqala ukuba sibeke imithetho ngokuvumela ukuphetha ubudlelwano phakathi nabobulili obufanayo.
Vermont - lena umbuso wokuqala US lapho bavunyelwe ukuba bashade abantu abanjalo. Owesibili kwaba yilona Massachusetts. Okwesithathu - California. Kube ukubhalisa imishado ongqingili waqala ngo-2008, kusukela 16 Juni. Ezinyangeni zokuqala kanye ayizinkulungwane 18 imibhangqwana iye isicelo, futhi ngashada! Kodwa-ke umthetho, ngomqondo ongokomfanekiso, kukhanselwe, futhi ayisekho ukungena imishado. Bangaphezu kuka-50% sabantu yaseCalifornia (ie 52,1%) yayiphambana isiphelo sesimiso ubudlelwane esemthethweni phakathi ongqingili. Kodwa ngemva enkantolo eside kwamacala Februwari 2012, iNkantolo Yokudluliswa San Francisco kwasuswa kuvinjelwe imishado yabantu bobulili obufanayo.
Ngo-2008, ukuvinjelwa sahoxiswa nokuningi e-Connecticut. Iowa e 2009 neyaziwayo bobulili obufanayo umshado isinqumo esifanele. Kwalandela United of New Hampshire futhi Maine. Khona-ke asekelwe umthethosivivinywa, futhi eNew York, futhi ngemva kwakhe - Maryland. Isimo Elokugcina liye Washington ukubekezela.
Ngo-2009, ezweni ukubekezela isithwathwa wajoyina eMexico. Mexico City yiyona idolobha lokuqala e-Latin America, lapho umshado bobulili obufanayo kumele kuphetfwe ngokusemthethweni.
Argentina wajoyina uhlu uthi ibayeke 2010. Futhi eside ngaphambi kwalokho, ngo-2002, izwe okokuqala kwezithelo zonke Latin American, okuyinto bavunyelwa ukuba abantu bobulili obufanayo, siphile kanye nani. Nokho, babengatshelwanga bavunyelwe ujabulele amalungelo ezijatshulelwa imibhangqwana athandana nabesifazane.
Ngo-2011, akunjalo kudala, iNkantolo Brazil Ephakeme bavunyelwe ukuba babhalise imishado yabantu bobulili obufanayo. Kodwa, kuyathakazelisa ukuthi kulesi sifundazwe akukho umthetho kahulumeni ukuthi kuyalifakazela iqinisweli.
Futhi amazwana ambalwa mayelana izwe laseYurophu lapho imishado izitabane zivunyelwe. E-UK, ngokusemthethweni lo mthetho usuyasebenza akunjalo kudala, kancane kuka eyikhulu nengxenye edlule. Abesilisa nabesifazane asebeneminyaka mfazi ngaphakathi nemikhosi civil kanye isonto. Kodwa hhayi iSonto LaseSheshi - yisimo eyodwa. France enwetshiwe amazwe aseYurophu, esangenza imishado yabantu bobulili obufanayo ngo 2013. Ongqingili bavunyelwa ukuba ungene futhi bathathe izingane.
I Russian Federation
On insimu yezwe lethu ukubhalisa umshado kobungqingili akunakwenzeka ngoba umthetho Russian kungenzeka ukukhipha ezifana ubuhlobo akusho lokulawula. Ngaphezu kwalokho, imishado yabantu bobulili obufanayo ukuthi ifakwe ku kwenye State Ilungu (okuyinto kuvunyelwe), kwi insimu yezwe lethu ayibonwa njengoba evumelekile. Luhlaka lwetemtsetfo kazwelonke kumane ephambene.
ERussia, akunakwenzeka nanini ukuba bavunyelwe ukuba bashade abantu bobulili obufanayo. Sinesimo sengqondo ehlukene, isimo ezahlukene lokubala ubuningi babantu kanye nomphakathi. osopolitiki Russian, kanye iningi Izakhamuzi zezwe lethu, baphikisa ngokuthi imishado enjalo - akuyona kuphela okuholela ukushabalala esizweni sayo, kodwa nakho kuyisici esibangela esibhubhisa zokuziphatha nezimiso zomphakathi. Nokho, wonke umuntu umbono wakhe ngale ndaba, futhi imithetho emhlabeni zihlukile, kodwa lokhu akulona eRussia, futhi abaningi bayakujabulela leli qiniso.
Kanjani umama ongayedwa uthola ukwesekwa ingane? Izinhlobo izinzuzo kanye namathuba
Lokuvimbela Inzalo Sponge: ngobuhle nangobubi bawo
Ukubukeka kanjani njengesibonelo? Ukubukeka komfanekiso nesithombe